Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny hopitaly Thailand dia mahita karazana sub-variana Delta vaovao
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Zana-karazan-karazany Delta vaovao hitan'ny hopitaly Thailand - Sary natolotry Pattaya Mail
Ny hopitaly Ramathibodi any Thailand dia nahita karazany vaovao miisa 4 amin'ny faran'ny Delta an'ny coronavirus vaovao amin'ny santionany izay nohamarinin'ny hopitaly.
Hatreto, ny manam-pahaizana dia namantatra ny fiovana mety ho 60 amin'ny fanaingoana genetika ny karazana Delta.
Amin'ireny, 22 no fantatra fa tompon'andraikitra amin'ny fisian'ny karazan-karazany hafa.
Ny delta variants dia manodidina ny 60 isan-jato mahery noho ny viriosy SARS-CoV-2 tany am-boalohany ary afaka mandositra ny tsimatimanota noho ny aretina mialoha ny antsasaky ny fotoana.
Ny lehiben'ny Ivontoerana ho an'ny genomika ara-pitsaboana ao Ramathibodi, Prof. Dr. Wasun Chatratita, dia nilaza fa ny sub-variants dia hita tao amin'ireo santionany voaray avy amin'ny hopitaly maro manerana an'i Thailand.
Nilaza izy fa ny AY.4 (B.1.617.2.4) ambany sub-variana dia hita tao amin'ny 3% ny santionany nalefa avy tany Pathum Thani, raha ny AY.6 (B.1.617.2.6) kosa dia hita tamin'ny santionany 1% tamin'ny faritra rehetra firenena. Mandritra izany fotoana izany, ireo sub-variants AY.10 (B.1.617.2.10) sy AY.12 AY.12 (B.1.617.2.15) dia hita tamin'ny santionana 1% nalefa avy tany Bangkok.
Hatreto aloha, ny manam-pahaizana dia nahita fiovana maherin'ny 60 mety hitranga amin'ny fanaingoana genetika ny karazana Delta. Amin'ireny, 22 no fantatra fa tompon'andraikitra amin'ny fisian'ny karazan-karazany hafa. Ny sub-variants Delta voalohany, izay voamarina, AY.1 ary AY.2, dia hita voalohany tao Nepal.
Ireo mpikaroka ao amin'ny Columbia University Mailman School of Public Health dia nampiasa modely amin'ny solosaina haminavinaana fa Ny delta variants dia manodidina ny 60 isan-jato mahery ny areti-mifindra noho ny viriosy SARS-CoV-2 tany am-boalohany ary afaka mandositra ny tsimatimanota amin'ny aretina mialoha ny antsasaky ny fotoana. Raha ampitahaina amin'ny Delta, Beta sy Gamma dia tsy azo ampitaina fa afaka mandositra ny tsimatimanota. Raha ampitahaina amin'ny viriosy tany am-boalohany dia mahafaty olona lehibe kokoa ny Iota.
Dr. Wan Yang, PhD, profesora mpanampy amin'ny epidemiolojia sady mpanoratra ny fandinihana dia nilaza hoe: "Ny fiovaovan'ny SARS-CoV-2 vaovao dia nihanaka be, fa ny vaksininy amin'izao fotoana izao dia mbola mandaitra tsara amin'ny fisorohana aretina mahery amin'ireo aretina ireo, koa mba miangavy vaksiny raha mbola tsy nanao an'izany ianao.
“Zava-dehibe ny hanarahanay maso akaiky ny fiparitahan'ireny karazana variant ireny mba hitarihana ny fepetra fisorohana, ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana vaksiny, ary ny fanombanana ny fahombiazan'ny vaksinina.
“Amin'ny ankapobeny, ny famerana ny fisian'ny fiovana vaovao sy ny farany ny valanaretina COVID-19, mila ezaka eran-tany izahay amin'ny fanaovana vaksiny ny mponina rehetra manerantany, ary manohy mampiasa fepetra ara-pahasalamam-bahoaka hafa mandra-piarovan'ny vaksininy ny ampahany ampy amin'ny mponina. ”